कसरी बोधो र चिसो बन्न?
थप र मान्छे, विशेष गरी युवा मान्छे, बोधो बन्न कसरी रुचि राख्नुहुन्छ। भावना - कि राम्रो। तर सधैं। जीवन अप्रत्याशित छ, त्यहाँ माथि र तल छन्। र केही धेरै भावनात्मक, दयालु, सहानुभूतिशील र कमजोर मान्छे गम्भीर चोट लाग्नु सक्नुहुन्छ पछिल्लो। यदि यो नियमित रूपमा हुन्छ, हामी कुनै तरिका स्थिति बेवास्ता छ। र धेरै प्रश्न को मनमा चिसो र भावशून्य बन्न कसरी आउँछ। बस अब खातिर महसूस दुखाइ, को महसुस छैन विफलता को शोक। यो सबै भन्दा राम्रो उपाय हो, तर केही परिस्थितिमा मात्र तरिका बचत गर्न। तपाईं यो विचार जीवन अनुवाद मद्दत गर्ने पक्का हो कि केही सुझावहरू छन्।
सबैले दिइएको छ
बस आफ्नो समय लाग्न। तपाईं भावना को आफैलाई छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ भने किनभने, राम्रो सोच सुरु गर्न। अक्सर तिनीहरूले निर्मूल भन्दा ठीक गर्न गाह्रो हो। खैर, सबैले असंवेदनशील हुन सक्छ।
सम्झना: त्यहाँ भावना केही मान्छे को साँचो अभाव। सामान्यतया, यो क्रूरता र रगत मानिसहरूलाई मा शांत। नरक डाटा एक predisposition हो भने, र हाम्रो वर्तमान प्रश्न सजिलो छ समाधान। अन्यथा, तपाईं बस घाँटी नै र यसको आन्तरिक संगठनमा कदम छौँ।
एक कसरी बन्न बारेमा अक्सर भावशून्य मानिस, असल मान्छे सहानुभूति हुनुहुन्छ। र क्षमाशील। तिनीहरूले गम्भीर तिनीहरूलाई काम हुनेछ। अभ्यास शो रूपमा, छैन साँच्चै जीवन विचार ल्याउन सक्षम छन्। एक समय को लागि हो। र भित्र बस्नेछ दोषी। एक वास्तविक सुन्दर यो अनुमति छैन।
मात्र मदत गर्न सक्छ, जो पहिलो नियम, - आफ्नो दुःख रिटर्न। हरेक व्यक्ति दुखाइ वा ठूलो अपमान ल्याउन केही सम्झनाहरु छ। यो तपाईं कवर हरेक समय ह्यान्डल गर्न अवचेतन उहाँलाई छ छ सकारात्मक भावना।
सामान्यतया पहिलो यो एक धेरै पीडादायी अनुभव नकारात्मक अंक बन्दछ। तर एक बिन्दुमा, यो भावना गायब। र तपाईं अझै पनि हुन्छन्। तपाईंले एकपटक यो हासिल, यो समस्या समाधान गर्न सजिलो हुनेछ।
भीडलाई सबै नकारात्मक घटनाहरू एक पटक याद गर्न प्रयास गर्नुहोस्। मात्र तरिका तपाईं पूर्णतया कसरी बोधो बन्न जवाफ सक्षम हुनेछ। हो, यो असम्भव लाग्न सक्छ, तर लामो अभ्यास, तपाईं आफ्नो व्यवहार मा एक खास परिवर्तन नोटिस हुनेछ।
दोस्रो नियम - यो कुनै कुरा के ध्यान छैन। मानिसहरू, न त कुनै पनि घटनाहरु न। बिदाको, नातेदार, मित्र बारेमा बिर्सन्छन्। तपाईं सुन्दर गणना सुरु गर्न कसैले छैन जन्मदिनको भएपछि कहिलेकाहीं पर्याप्त।
हो, सुरुमा गाह्रो हुनेछ। विशेष गरी यो आफ्नो मनपर्ने छुट्टी छ वा त्यहाँ उज्यालो, खुसी, भावनात्मक घटना केही क्रमबद्ध हुँदा एक समयमा। तर तपाईं यो सिर्फ बेवास्ता गर्नु हुँदैन, र भावशून्यता संग भेट्न। तपाईं यसलाई सिक्न सम्म, छैन भावशून्य मानिस बन्न आउँछन्। आखिर, त्यस्ता मानिसहरूलाई सामान्यतया शायद आफ्ना भावनाहरूलाई देखाउँछ। अक्सर, आफ्नो अनुहार मा तपाईं सबै कुरा गर्न पूर्ण भावशून्यता देख्न सक्छौं।
"नहीं" प्रयोग उदाहरणका लागि
एक धेरै रोचक तथ्य - तत्काल कसैले मद्दत गर्न इन्कार तपाईं क्रूर खराब व्यक्ति बनाउँछ। तपाईंलाई साँच्चै कुनै मद्दत इन्कार गर्न सक्दैन भने वा केही विशिष्ट, वैध कारण। त्यसैले, भावशून्य प्राणी कसरी बन्न पत्ता लगाउन, तपाईं बस मानिसहरूलाई मदत गर्न आवश्यक छैन। सबै छ। बिल्कुल। सानो पनि कुराहरू। मद्दत धेरै लाभदायक छ सम्झना। विशेष गरी व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। तिनीहरूले अक्सर तपाईं हानि गर्नेछ भन्ने कुरा तपाईंलाई चाहिन्छ। साथै, व्यवहार मा सहायता सकारात्मक भावना evokes। र यो के तपाईं छ। सबै पछि, तपाईं confronts मुख्य कार्य - भावना को छुटकारा गर्न।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं सधैं इन्कार गर्नुपर्छ भनेर। र सहायता अत्यावश्यक छ पनि भने। सुरुमा सजिलो हुनेछैन। तर अन्ततः तपाईं प्रयोग प्राप्त। खैर, अक्सर यो चरण धेरै सजिलो जीवन हो। तपाईं आफूलाई को हानि गर्न केहि छैन।
तपाईं अक्सर चोट? वा शायद तिमी सिर्फ अनन्त भावनात्मक tyranny मा दिन? बल र साहस ... र otzerkalte व्यवहार पाउन। आफ्नो abusers एक कर्ड स्पर्श गर्न नडराऊ। तर, अन्य सबै मान्छे जस्तै।
यो कस्तो अर्थ राख्छ? को अपराधीहरूले नै तरिकामा हौं लागि तिनीहरूले तपाईंलाई लागू रूपमा। एक नातेदार वा मित्र / जानकारी - म यो छ जो मतलब छैन। मानिसहरू चोट ल्याउन, उदाहरण। तिनीहरूले सामान्यतया पछ्याउने बस आदर्श उदाहरण हुन्। आखिर, घर हिट गर्ने क्षमता - यो एक क्रूर मानिसको लागि राम्रो कौशल छ।
के दया र मित्रता संग तपाईंसँग कुराकानी गर्ने बारे? प्रतिविम्ब यहाँ मदत गर्दैन - सकारात्मक भावना यस अतिरिक्त शुल्क। निरन्तर तिनीहरूलाई केही आपत्तिजनक बताइरहेका, अप्रिय, यस्तो व्यक्तिहरूलाई देखि पुल टाढा प्रयास गर्नुहोस्: त बस आफ्नो आक्रमणकारीहरूले उदाहरण लिन। समय, यो तपाईं बानी प्रवेश गर्नेछ।
तर तपाईं सुनको नियम सधैं सम्झनुपर्छ कि। तपाईं कसरी असंवेदनशील बन्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सबै भावनाहरू नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक छ। ठ्याक्कै कसरी यसो गर्न? सही अल्गोरिदम यहाँ छैन। केही सल्लाह जबसम्म।
, सुरु गर्न भावना दबाउन बनाउँछ कि एक पेशा चयन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, एक डाक्टर। तपाईं आज जीवन हाम्रो विचार ल्याउन मदत गर्नेछ केही कुराहरू सिक्न सक्नु हुनेछ।
यो पनि भावना मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम र तालीम को एक किसिम हो नियन्त्रण गर्न एक राम्रो तरिका हो। तिनीहरूले भनिन्छ - "भावना को नियन्त्रणमा।" तर, नकारात्मक रोक्न थप सिकाउनुभयो छन्। तर एउटै सिद्धान्त सकारात्मक भावना व्याख्या गर्न सकिन्छ।
अन्त मा, आफ्नै प्रयास आफैलाई भित्र सबै राम्रो राख्न र दबाउनु। सोच्नुहोस्: "सबै कुरा खराब छ।" र नै यो समय दोहोर्याउनुहोस्। पनि सबै ठीक छ भने। ढिलो होस् वा चाँडो तपाईं आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्न सिकेका कसरी नोटिस हुनेछ। यस मामला मा, त्यहाँ सधैं मात्र ढुङ्गा, सञ्चार गर्दा emotionless अनुहार राख्नेछ।
सबै छ। बस एक क्रूर र भावशून्य बन्ने अघि राम्ररी तपाईं साँच्चै यो आवश्यक छ कि छैन विचार गर्नुहोस्। पुनः प्राप्त गर्ने भावना गाह्रो हुनेछ। दुखाइ सधैं डुबा भन्दा मार्फत जान सजिलो छ।
यसलाई म बच्चा मन छैन भनेर मलाई देखिन्छ। के गर्ने? मनोवैज्ञानिक सल्लाह
व्यापार व्यक्तिको तस्बिर वा कसरी राम्रो प्रभाव बनाउन
Zhak Lakan, फ्रान्सेली दार्शनिक र मानसिक रोगको चिकित्सक: जीवनी
Antibacterial तैयारी "Zinerit": समीक्षा, अनुप्रयोग अघि र पछि फोटो
को लोटस को जरा: गुणहरू, व्यञ्जनहरु, लाभ र हानि
त्यो थाईल्याण्ड देखि निर्यात गर्न सकिँदैन: सिफारिसहरू पूर्ण सूची र
शिक्षा को प्रक्रिया - यो के हो? प्रक्रिया आधारभूत र तरिका
तपाईं यूस्पस्कीको पोष्टमा के गर्न सक्नुहुन्छ? कति छिटो छ?
प्लट-भूमिका-खेल खेल र छोराछोरीको पालनपोषण यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका